Iphupha nge-Bucket Discover ➡️ Discover Online Online ➡️
Mhlawumbi yonke into el mundo yazi ibinzana elithi "yonke into esebhakedeni," into ethetha ukuba kukho into eyaphukileyo okanye engaphumelelanga. Oku akuyomfuneko ukuba ibe yinto ebonakalayo. Kule meko, sithanda ukuthetha ngento enye: iiprojekthi ezihambe gwenxa ngokupheleleyo. Naxa ubudlelwane busilela, olu qulunqo lusetyenziswa rhoqo kwaye ke lwenza ukuba wonke umntu aqonde ukuba akukho nto iseleyo ukugcina apha.
Ibhakethi njengento ngokwayo linentsingiselo yenkunkuma kuthi kwaye yenziwa ngeplastiki okanye ngesinyithi. Rhoqo ibonelelwa ngesiphatho sokuphatha, ikwasebenza njengeyona ndlela ilungileyo yezothutho kwaye iyaguquguquka apha. Nokuba kungokuthuthwa kwegrabile okanye isanti, amanzi, iziqhamo ezivunyiweyo okanye iintlanzi, i-emele ingasetyenziswa ngeendlela ezininzi.
Ukuba uphawu lwephupha "ityhubhu" libonakala kuwe ngelixa uleleyo, kukho inani lezinto ezinomdla ezinokutolikwa.
1 Uphawu lwephupha «ityhubhu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ityhubhu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ityhubhu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ityhubhu» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso wephupha lekyube ungabonakala njengophawu oluqinisekileyo kutoliko lwamaphupha ngokubanzi. Oku kuyinyani ngakumbi xa kuziwa kwibhakethi elipheleleyo kwihlabathi lakho lamaphupha. Ukuba izaliswe ngamanzi acacileyo, iyathembisa Suerte kunye nempumelelo enkulu, ngokufuziselayo unako, ngokutsho, "ukufumana okungcono kuyo."
Kwelinye icala, kuya kufuneka ucinge ngokuchaseneyo xa unayo ityhubhu engenanto phambi kwakho. Isongelo apha ilahleko y IKummer. Olu phawu luphupha lukwanentsingiselo efanayo ukuba luzaliswe ngamanzi anamafu namdaka. Oku kunokuba ngumqondiso wesifo esinokwenzeka.
Njengoko sele ubona, kubaluleke kakhulu ukuba kwaye yintoni ibhakethi lamaphupha akho lizele. Apha kuhlala iimeko zomntu ngamnye ephupheni. Kumsebenzi wokwakha, ibhakethi eligcwele isamente kufuneka lijongwe kwimeko eyahlukileyo kunokuba inokubonwa ngugqirha. Ukubona ibhakethi yobisi ephupheni kudibanisa ukutolikwa ngokubanzi kwephupha, umzekelo, uneemvakalelo ezilungileyo kwaye ikamva eliqinisekileyo.
Ukuba umntu othile ukukunika ibhakethi, kufuneka ulumke kwaye uzikhusele ekulahleni inkunkuma eninzi yengqondo kunye nokuzikhusela kuwe. Apha, ukutolikwa kwamaphupha kucebisa ukuba kuthathelwe ingqalelo ngononophelo ukuba ngaba ukulungele na ukuthwala umthwalo wenye kwaye kangakanani. Kwelinye icala, ukuba ibhakethi lakho libiwe, ungonwaba kuba oko kuthetha ukuba kungekudala uza kuphelisa amaxhala oxinzelelo.
Ukuba ephupheni ibhakethi lisetyenziswa njengendawo yokutshiza ngecuba okanye nasekutshicelweni, oku kungabonisa utyekelo olungalunganga, olukhulayo kwihlabathi eliphaphamayo.
Uphawu lwephupha «ityhubhu» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha, "ityhubhu" yemifanekiso yamaphupha inxulumene ngokusondeleyo kwilizwe leemvakalelo lamaphupha. Apha kwakhona, ngokufana nokutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, umntu ubona ibhakethi elizaliswe kakuhle, umzekelo, njengophawu oluchanekileyo. Ngenxa yokuba idluliselwe kwinqanaba leemvakalelo, banokuvela apha. izakhono ezahlukeneyo kunye nezixhobo zomntu ophuphayo.
Ukubona okanye ukuphatha ibhakethi elinomngxuma phambi kwakho luphawu olucacileyo Ukugqithisa jonga. Kuphi apho ulwela khona ilize ebomini bakho ngaphandle kokuvuzwa ngempumelelo? Apha kufanelekile ukujonga ukuba umntu unamathele kwizinto ezincinci kakhulu kubomi bemihla ngemihla kwaye ngenxa yoko uphazamisekile ekufezekiseni eyona njongo yakhe.
Ukuba i-emele ithululwe kwilizwe lamaphupha, oku kunokuba luphawu lwe-subconscious yephupha ukuzikhulula kwi-ballast engafunekiyo nangakumbi kwilizwe lokwenyani. ukwenza lula ukuzisa ebomini bakho.
Uphawu lwephupha «ityhubhu» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, umfanekiso wephupha ityhubhu eqhutywa ephupheni uhlala ufuzisela umvuzo ngenkuthalo yamaphupha.